Conveyor Fekitori, Vatengesi - China Conveyor Vagadziri
Iyo inotsvedza conveyor inoumbwa nemusoro chikamu, wepakati tangi muviri, muswe chikamu, chinokwenenzvera conveyor cheni, yekutyaira chishandiso uye yekuisa yekurara danda. Yakanyatso kuvharwa chimiro, hapana kubatika kwezvinhu panguva yekushanda; conveyor cheni inotora roller cheni, imwe chete cheni dhizaini fomu; iyo yekunze uye kutumira kunze kwemidziyo, kuendesa kureba kunogona kuchinjika dhizaini uye kurongedzwa zvinoenderana nemaitiro anodikanwa.
Iyo dhayamita yeLS type screw conveyor ndeye 100 mm- Iyo yakareba urefu hweimwe chete dhiraivha muchina inogona kusvika 40m (yakawandisa 30m). Iyo mbiri yekutyaira sikuru muchina inotora chimiro chepakati chakaputswa mugodhi, uye iyo yakareba urefu inogona kusvika 80m (super hombe 60m).
SCG Vibrating chinotakura
SCG dzakateedzana-refu-tembiricha yakakwira-tembiricha zvinhu vibration conveyor inoshandiswa zvakanyanya mukuchera, simbi, zvekuvaka, marasha, kemikari indasitiri, zviyo, mushonga uye mamwe maindasitiri. Iyo tembiricha iri pazasi pe300 ℃ yemarudzi ese eupfu, granular, block uye yavo musanganiswa.